China Carbide Rotary Burr SF Shape -Tree Shape amin'ny Radius End mpanamboatra sy mpamatsy |Xinhua
Carbide rotary burr SF endrika dia antsoina koa hoe carbide rotary burr amin'ny hazo endriky ny radius farany,
Size SF1225 / SF-5 Carbide Rotary Burr no habe malaza indrindra amin'ny indostrian'ny fanamboarana sambo.
1. Azo amboarina araka ny takian'ny mpanjifa (metrika na inch habe)
2. Ny habe mahazatra eo amin'ny tabilao etsy ambany, raha manana fepetra hafa, azafady mba lazao anay.
3. endrika maro, toy ny cylindrical tsy misy farany tapaka, cylindrical amin'ny faran'ny tapaka, hazo radius faran'ny lelafo faran'ny sy ny ambaratonga samihafa;
4. Adikao ny santionany na mamokatra carbide burr araka ny sary;
5. Manome serivisy namboarina izahay, ny fepetra rehetra dia azo ifanarahana.
Endriky ny hazo miaraka amin'ny radius farany karazana F F0313X03-25 3 13 3 38 X
teo aloha: Carbide Rotary Burr SE endrika -Oval endrika
Manaraka: Carbide Rotary Burr SG Shape -Tree shape with pointed end